बुढानिलकण्ठमा ओलीको सन्देश : वैकल्पिक सरकार बन्‍न सक्दैन, मंसिरमा चुनाव गरौं- समाचार - कान्तिपुर समाचार
नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना र संसदको अंकगणित के छ ?
काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको बुढानिलकण्ठस्थित निवासमा बुधबार प्रधानमन्त्री केपी ओली पुग्नुअघि नै कांग्रेस नेताहरु जम्मा भइसकेका थिए । चार सहयोगीका साथ देउवा निवास पुगेका ओलीले सुरुमै भोट माग्न आएको भन्दै हाँसो गरे । औपचारिकतामा भने उनले कांग्रेसले भोट दिने अपेक्षा आफूले नगरेको सुनाए ।
किन दिए ओलीले कांग्रेस नेताहरुलाई यस्तो सन्देश ? पछिल्लोपटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षलाई सरकारमै सामेल गराएर दुई वर्ष आफ्नै नेतृत्वको सरकार टिकाउन ओलीले खोजेको आशंका देउवालाई परेको थियो । त्यही आशंकाले देउवाले वैकल्पिक सरकारका लागि केही गुप्त पहलहरु थालेका थिए । कर्णालीमा एमालेकै झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षको फ्लोरक्रसले माओवादी नेतृत्वको सरकार जोगिएपछि त्यसले देउवालाई उत्साही बनाएको थियो । यसको ठीकविपरीत प्रधानमन्त्री ओलीलाई भने निराशा बनाएको थियो । खनाल–नेपाल पक्षले देउवालाई कर्णालीको उदाहरण दिँदै आश्वस्त हुन सुझाइरहेकै बेला असुरक्षित महसुस गर्दै जान थालेका ओली आफूविरुद्ध जुनसुकै बेला अविश्वास प्रस्ताव आउन सक्ने बुझेरै त्यसअघि नै विश्वासको मत लिने निर्णयमा पुगेका हुन् । उनले संसद्‌मा विश्वासको मत लिने निर्णय गरे पनि वैकल्पिक सरकारको सम्भावना भने अझै टरिसकेको छैन । त्यसैकारण कांग्रेसलाई आश्वस्त तुल्याएर आफ्नै नेतृत्वको सरकारबाट निर्वाचन गराउने सन्देश ओलीले बुढानिलकण्ठमा छाडेका छन् ।
पहिल्यै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको भए ओलीलाई सत्ता जोगाउन सकस पर्थ्यो । विश्वासको मत लिने प्रस्ताव राखेर ओलीले आफ्नै नेतृत्वमा निर्वाचन गराउने ‘कोर्स’ अघि बढाएका छन् । जुन कांग्रेस सभापति देउवाले पनि चाहेकै बाटो हो ।
आफ्नो विपक्षी कित्तामा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो नजानेमा प्रधानमन्त्री ओली जति विश्वस्त छन् जसपा एक ढिक्का भएर समर्थन नजनाएसम्म आफू प्रधानमन्त्री बन्न नसक्नेमा देउवा उत्ति नै ढुक्क छन् । कांग्रेसका एक नेताका अनुसार नयाँ सरकार बनाउन भारतले ग्रिन सिग्नल दिए देउवा अघि सर्न सक्छन् । होइन भने बहुमत संख्या नपुगीकन देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लैजाने संभावना छैन ।
अल्पमतको सरकारले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाउन सकेन भने संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रतिनिधिसभाका जोसुकै सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने बाटो खुल्छ । त्यस्तो बेला बहुमत देखाउन सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यतिबेला पनि बुहमत पुर्‍याउन सक्ने अवस्था अरु नेताका लागि भन्दा बढी अनुकुल ओलीकै लागि हुन्छ । ‘शेरबहादुर, प्रचण्ड, माधव नेपाल, महन्थ ठाकुर सबैलाई भित्री रुपमा थाह छ किन वैकल्पिक सरकार बन्न सकिरहेको छैन भनेर..’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘७६ (५) मा पुगेरै प्रतिनिधिसभा विघटन हुन्छ । त्यतिबेलासम्म अर्को सरकार बन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’
प्रकाशित : वैशाख २३, २०७८ २०:४२
वैशाख २३, २०७८ रुपा गहतराज
काठमाडौँ — बाँकेमा कोरोना संक्रमण दर बढ्दै जाँदा उपचार पछि निको भएर आइसोलेसनबाट डिस्चार्ज हुनेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । बाँकेमा बिहीबार ५ सय ८ जना संक्रमित निको भएर घर फर्केका छन् । दुई सय ४१ महिला र २ सय ६७ जना पुरुषले कोरोनाबाट मुक्त भएका हुन् ।
अहिले बाँकेका अस्पतालमा ५ सय ७६ जना र होम आइसोलेसनमा ३ हजार ५ सय ५९ जना कोरोना संक्रमित रहेका छन् । भेन्टिलेटरमा १० जना बिरामी छन् ।
यसैबीच बिहीबार बाँकेका दुई वटा प्रयोगशालामा गरिएको स्वाब परीक्षणमा २ सय ७३ जनामा कोरोना देखिएको छ । कोहलपुर मेडिकल कलेजमा एक सय ९ जनाको परीक्षण गर्दा ८६ जनामा र बागेश्वरी ल्याबमा २ सय ८३ जनाको परीक्षण गर्दा एक सय ८७ जनालाई कोरोना देखिएको हो ।
सबैभन्दा धेरै जनाको स्वाब परीक्षण हुने गरेको भेरी अस्पतालको बिहीबार रिपोर्ट बाहिर आइसकेको छैन । भारतबाट आउँदा नाकामा हुने एन्टिजिन जाँचको रिपोर्ट पनि अझै आएको छैन ।
प्रकाशित : वैशाख २३, २०७८ २०:२९